Mkpa Oil Case
Ngwá Ọrụ Case
Ọkà Okwu Case
Na Beyond Case, anyị chepụta ma na-emepụta elu-ọgwụgwụ omenala ikpe na kasị mma suut gị na ngwa.
The factory management a mma na systematized ebe anyị gafere Nyocha nke ISO9001: 2008 na 2014.
N'ime afọ 10 'ahụmahụ
Na ọtụtụ ihe ọmụma na nka nke ihe karịrị afọ 10 na ubi, anyị na-eji pụrụ iche teknụzụ, ngwaọrụ, na-ụlọ mmepụta na àgwà akara ike kacha mma omenala ikpe.
100% afọ ojuju fim na àgwà na ọrụ:
Anyị ji anyị onwe anyị na a 100% afọ ojuju mba si anyị ahịa.
The Omenala Kpụrụ ole nwere ike iji dabara ọ bụla ụdị ngwá. The ukwuu engineered imewe awade nche megide mmetụta, ájá, anyanwụ, mmiri na ndị ọzọ na gburugburu ebe obibi nsogbu. Interiors nwere ike kpụrụ ka kpọmkwem akụkụ nke gị enclosures ma ọ bụ anwụ bee ụfụfụ nwere ike kwukwara maka mmezi nchebe.
SHBC top ọkwa OEM ike shei Eva ike ikpe bú ...
SHBC elu-ọgwụgwụ waterpoof Eva electronic ikpe
SHBC Top ọkwa shockproof omenala Eva Ngwá Ọrụ Case
SHBC waterproof ahaziri ike shei Eva cover ...
SHBC omenala ike shei nchekwa ebu ikpe
SHBC Top ọkwa ahaziri Eva omenala mkpọchi uwe ikpe
SHBC elu ọgwụgwụ ahaziri waterproof ike Eva ikpe
Waterproof elu ọgwụgwụ Eva ike ebu ikpe
A Case Of Ogo:
ọ bụla ikpe, ọ bụla mkpa:
Shanghai Beyond Case e hiwere na 2005, raara na imewe na-Nlụpụta elu-ọgwụgwụ custom EVA cases. Our unwavering commitment to excellence and customer satisfaction has earned us a great reputation world widely, is a leading global manufacturer of professional EVA carrying case solutions.
100% Omenala, ejiri mee, nyochara: iwekota gị ngwaahịa karịa a ikpe, itinye ndị ọzọ ụkpụrụ gị ngwaahịa na a quality ikpe.
A omenala Kpụrụ ole ikpokọta nchedo a ike ikpe na-egosipụta na portability nke a adụ ikpe. The ọkara isiike omenala kpụrụ ikpe na-enye adịghị agwụ agwụ imewe nhọrọ n'ihi na ma ime na mputa nwere ike ịbụ anọgide contoured ka nta ka ọ bụla udi ma ọ bụ size.
Omenala obere shockproof eluigwe na ala Eva njem ...
China factory N'ogbe echebe Gaming ndi isi ...
Mkpọchi uwe Headphone eburu Case Nchekwa Bag obere akpa
Mmiri na-Merie Ike Ileba maka GoPro dike 5,4, 3+, ...
Shockproof Waterproof Portable Ileba maka GoPro dike
Universal Travel Ileba maka GoPro ma ọ bụ Obere Electr ...
Ebu Ileba maka GoPro dike 5/4/3 + / 3/2/1
Ekwentị: + 86-512-69578809
Okwu: Shanghai Beyond Case Co., Ltd.